Sandra Arteaga sy ireo zavaboary hafahafa manaitra azy rehetra | Famoronana an-tserasera
Ireo zavaboary mahavariana an'i Sandra Arteaga
Sandra Arteaga dia mpanakanto espaniola nipetraka tany Barcelona ary mahavita mamorona karazana zavakanto rehetra izay ahitantsika saribakoly, sary, firavaka ary karazana fifehezana zavakanto hafa. Ny mitondra antsika amin'ity lahatsoratra ity dia ireo zavaboariny manokana izay nataony tamim-pitandremana sy tamim-pitiavana lehibe, satria hita ao amin'ireo tsirairay hitanao fa navoaka teto.
Mpanakanto iray mampiseho ireo zavaboary mahavariana rehetra mandehandeha ao lafiny maizina sy mahatsikaiky kokoa izay nandalovan'ireo mpanakanto maro hafa ny sary; manao ahoana i Tim Burton sy ny tontolony maizina izay cajoles be dia be manerana ny planeta.
Zavaboary hafahafa izay mipoitra avy amin'ny sain'ity mpanakanto ity ary mampiseho ny famoronana lehibe sy originality izay sarobidy ao amin'izy ireo tsirairay avy. Biby goavambe izay mipetraka ao an-tsain'ny maro ary mipoitra avy amin'ny eritreritra mamorona an'i Arteaga hanakorontanana antsika ary hahatonga antsika hanintona tsiky kely rehefa mahita zavatra tena malemy paika sy sariaka isika.
Izy ireo dia hita amin'ny karazany rehetra sy amin'ny loko rehetra, satria amin'ity fahasamihafana ity amin'ny tonony Eo no ahitanao fahasoavana hafa amin'ny zavakanto ao amin'ny zavaboarin'i Arteaga. Biby goavam-be miaraka amin'ny kileman'izy ireo, fa izay ahitana ny maha-olombelona azy, toy ny mitranga amin'ny tarehy maro izay afaka mandalo eo alohanay amin'ny andro iray izay andalovantsika amin'ny arabe amin'ny tanàna lehibe iray.
Tontolo iray manokana ananan'ity mpanakanto monina any Barcelona ity mitaona antsika amin'ny fitaovana sy amin'ny alàlan'ny fivarotany amin'ny Etsy azonao ampiasaina mividiana ny sasany amin'ireo faritra niandohany mamorona. Tsy hahita olona toa azy ianao, ka ilay iray novidinao dia ho tokana tsy manam-paharoa, nalaina tao an-tsain'i Arteaga tany am-boalohany, miaraka amina loha kely kely hanesorana ireo biby goavam-be indrindra an'ny olombelona avy amin'ny satroka majika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ireo zavaboary mahavariana an'i Sandra Arteaga
Nambara ny famantarana sy ny sary Euro 2020
Karazana modely psd maimaim-poana sy ambany amin'ny Pixeden amin'ity fararano ity